Tontolon’ny asa : 80,5 % amin’ireo miasa, mbola manao asa hafa | NewsMada
Tontolon’ny asa : 80,5 % amin’ireo miasa, mbola manao asa hafa
Raha ny antontanisa farany (2013) navoakan’ny Instat, 400.000, 500.000 isan-taona ny tanora nahavita fianarana tonga eo amin’ny tsenan’ny asa. Betsaka ny vehivavy noho ny lehilahy. Mitombo tsy tapaka ny isan’ireo tsy anasa ireo ary vao mainka mihasarotra hatrany ny hahita asa.
Tanora avokoa ny 70 % amin’ireo tsy mahita asa eto amintsika. Efatra tapitrisa eo ho eo ny tsy anasa (2013) ary ankehitriny, efa manantombo lavitra io tarehimarika io.
Raha ny filazan’ny teknisianina mpanadihady sasany, betsaka asa atao eto Madagasikara, saingy maro ny tsy manara-dalàna, indrindra ny any amin’ny sehatra tsy miankina, ankoatra ny karama ambany, tsy manaraka ny lalàna maro mahakasika ny asa.
Maro ny mpampiasa tsy manaja izany, tsy manoratra ny mpiasany any amin’ny Cnaps, sns.
Araka ny fanadihadiana nataon’ny Instat ihany, 80,5 % amin’ireo miasa, mbola manao asa hafa any ivelany noho ny tsy fahampiana isan-karazany, tsy noho ny karama ihany fa ny asa atao mihitsy no tsy ampy na tsy mamokatra. 42,5 %, tsy ampy asa atao na tsy mifanaraka amin’ny fahaizany ny ampanaovina azy.
Manome endrika iray hafa ny tsy anasa io tsy fahampian’ny asa atao io. Manamafy izany ny Banky iraisam-pirenena. Olana hafa manimba ny asa ny krizy politika maharitra, fa indrindra koa ny tsy fahaizana mikajy ny tokony hotrandrahina, tsy fahaiza-mitantana miampy kolikoly avo lenta.
Kely vola ny fambolena
Raha ny fanadihadiana navoakan’ny Instat ihany, mbola mitana laharana voalohany amin’ny fanomezana asa sy famoranana asa eto an-toerana ny sehatry ny fambolena. Ny olana anefa, kely vola io sehatra tokony ho antoky ny fampandrosoana io. 674.000 Ar monja isan-taona ny vola azon’ny mpiasa iray any amin’ny fambolena. Manana “fidiram-bola tsara” ny mpiasam-panjakana, salanisa 2.410.000 Ar isan-taona.
Raha jerena ireo toe-draharaha sy ny zava-misy momba ny tontolon’ny asa ireo, tsy mahagaga raha mirona na voatery manao asa informel no betsaka. Tsy vitsy aza ny misafidy io sehatra io, satria any izy mahita fidiram-bola tsaratsara kokoa sy tsy misy maneritery.